Vaovao - Ny vaovao voalohany Inona avy ireo toetra mampiavaka ny firindrana iraisana iraisan'ny rehetra?
Ny vaovao voalohany Inona avy ireo toetoetran'ny fitambaran-javatra iraisan'ny rehetra?
Ny tsikombakomba manerantany dia mampiasa ny mampiavaka ny mekanisma ao aminy
ny tselika sy ny hetsika azo ampitaina azo antoka. Ny toetoetran'ny tsikombakomba manerantany dia: ny firafitra dia samy manana ny zoro lalimoany, ary ny zoro roa misy axial an'ny kambana manerantany dia samy hafa, amin'ny ankapobeny eo anelanelan'ny 5 ° -45 °.
Fampiasana fitambarana iraisana
Ao amin'ny fandefasana herinaratra haingam-pandeha haingam-pandeha, misy fantsom-pifandraisana ny valim-panaka sasany, ary ao anatin'ny toe-pahamendrehana, dia natao hiodina miaraka izy ireo hampitana ireo faritra mekanika amin'ilay hafainganam-pandeha. Ary manatsara ny fahombiazan'ny shafting. Ny fitambarana dia misy halves roa, izay ampifandraisina tsirairay amin'ny tsipika mitondra fiara sy ny zana-kazo voatosika. Amin'ny ankapobeny, ny masinina mandeha amin'ny herinaratra dia mifamatotra amin'ny fonosana sy milina miasa.
Misy karazana kofehy iraisana iraisan'ny rehetra
Ny valiny dia misy zana-kazo roa mifandray. Noho ny lesoka tamin'ny famokarana sy ny fametrahana azy, ny fiovana taorian'ny mari-pahaizana sy ny mari-pana, dia hiova ny toerana misy ny vatan-kazo roa, ary matetika tsy azo antoka ny fampifanarahana henjana. Ireo mpiorina, na manana fahaizana mandoa vola amin'ny famindrana toerana isan-karazany izy, izany hoe afaka mitazona ny fiasan'ny fifandraisana sy ny tanjon'ny fifangaroana eo ambanin'ny toe-piainan'ny fifindra-monina. Ny tsikombakomba dia azo zaraina ho kofehy henjana, fitambarana malefaka ary fiarovana azo antoka. Ireo karazana fampifangaroana, toetra mampiavaka azy ary ny anjara asany ao amin'ny sokajy fanamarihana ao amin'ny rafitry ny fampitana
Ny fametahana henjana dia tsy afaka mandefa fihetsiketsehana sy tselika fotsiny raha tsy misy asa hafa, ao anatin'izany ny kofehy bidirectional, ny fonosana tanany, ny fonosana clamp, sns.
Fampifanarahana malefaka Ny fonosana azo ovaina tsy misy singa elastika dia tsy vitan'ny fampitana fihetsiketsehana sy tselika, fa manana ambaratonga fampidirana samihafa ihany koa. Ny fahombiazan'ny tambiny radial sy ny angular dia misy rojom-piadiana, fametahana iraisana, fametahana rojom-baravarana, fametahana slider, fametahana diaphragm, sns.
Ny fampifanarahana malefaka amin'ny elastika elastika dia afaka mamindra ny hetsi-panoherana sy ny tselika manana ambaratonga samihafa fampidirana, fanatanterahana onitra radial ary angular; izy io koa dia manana ambaratonga hafa amin'ny fampihenana ny vibration sy ny buffering, manatsara ny fahombiazan'ny rafitra fifindrana ao anatin'izany ny valizy marolafy samihafa misy singa elastika tsy metaly sy fitambarana malefaka miaraka amina elastika metaly. Ny firafitry ny kofehy elastika isan-karazany dia samy hafa, ny conduction dia tsy mitovy, ary ny anjara toeran'ny rafitry ny fifindrana dia hafa ihany koa.
Ny fonosana azo antoka azo antoka koa dia manana ambaratonga samihafa amin'ny fanatanterahana onitra, ao anatin'izany ny karazana pin, karazana fikororohana, karazana vovoka andriamby, karazana centrifugal, karazana hydraulic ary fametahana fiarovana hafa
Ny halehibeny sy ny làlan'ny famindrana somary an'ireo famaky roa. Rehefa sarotra ny mitazona fampifanarahana henjana sy mazava tsara amin'ireo zana-kazo roa aorian'ny fametrahana sy fanitsiana, na rehefa hanelingelina ny famindra toerana fanampiny ireo hazo roa ireo mandritra ny fizotran'ny asa dia tokony hosoloina ny fitambarana malefaka. Ohatra, rehefa eo amin'ny làlan'ny axial ny famindrana radial, dia azo safidiana ny fikorisa mihetsiketsika, ary ny famindrana angular miditra na mifanelanelana amin'ny zana-kazo roa dia azo ampifandraisina amin'ny fitambarana iraisan'ny rehetra.
Ny fahamendrehana sy ny tontolo iainana miasa amin'ny fifangaroana. Couplings izay tsy mitaky lubrication dia matetika vita amin'ny singa vy ary azo itokisana kokoa; ny kojakoja mitaky fanosorana dia mora voan'ny griran'ny fanosorana ary mety handoto ny tontolo iainana. Ny fonosana misy singa tsy metaly toy ny rubber dia mora tohina amin'ny hafanana, haino aman-jery manimba ary hazavana mahery, ary mora mihantitra.
Noho ny antony toy ny famokarana, ny fametrahana, ny fanovana ny enta-mavesatra ary ny fiovan'ny mari-pana dia sarotra ny mitazona ny fampifanarahana henjana sy marina an'ireo hazo roa aorian'ny fametrahana sy fanitsiana. Misy fari-pahaizana sasany amin'ny famindrana toerana ao amin'ny làlana x sy Y ary ny zoro miolakolaka CI. Rehefa lehibe ny famindrana radial dia tsy azo atao ny mikambana amin'ny slider ary ny fifindranan'ny angular miditra na mifanelanelana amin'ny zoro roa dia azo ampifandraisina amin'ny tsivalana iraisan'ny rehetra. Rehefa mamoaka famindran-toerana fanampiny ireo zana-kazo roa ireo noho ny fanelingelenana mandritra ny fizotran'ny asa, dia tokony hifantina fitambarana malefaka.